Hababka kala duwan ee Streaming To Watch Videos On Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Inkasta oo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ayaa soo bandhigay kaydinta iyo taageero USB ah qaababka dibadda, waxaa laga yaabaa in aad wali ma ku raaxaysan kartaa videos si guul leh. Si kastaba ha ahaatee, taasi ma dhammaadka wakhtiga dunidu ka, haddii aad dhabtii doonaysid in aad ka jaftaa dibadda video gallery. Halkan dhowr hab oo laysku halayn karo ee hoorto videos u taliya soo adiga Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waxay ku qoran yihiin baxay. Wixii dheeraad ah oo xal fudud, hubi this page >>
Habka 1: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate
Habka 2: DLNA Streaming
Habka 3: geliyaan si ay u OneDrive (sidoo kale loo yaqaan SkyDrive)
Habka 4: Kabka AllShare Mirroring on Android Devices
Taageerada ilaa 150 qaabab file kala duwan.
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli video in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Waxaa la dhisay-in video editor iyo downloader online.
Abuur, qoraaga iyo gubi DVD.
Tallaabada 1. files Upload ka kaydinta dibadda
Marka hore hubi in aad computer iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waa in shabakad isku mid ah. Markaas waxaad kartaa jiitaa-iyo-hoos u aad video files in uu kaydiyaa dibadda gal Converter ama guji Add Faylal ay si geliyaan faylasha.
Tallaabada 2. Start geeyo
Markaas tagaan "Stream" Murayaad, taas oo dhinaca midig ee barnaamijka. Halkan ka heli dooro qalab Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah oo ku dhufatey "Stream" button.
Tallaabada 3. Xakamee loo maqli ah
Waxaana jiri doonta suuqa kala pop-up korkiisa meesha aad xakamayn kartid loo maqli ah. Tusaale ahaan, waxaad xakamayn kartaa mugga iyo loo maqli kale fursadaha ee shaashadda ka guddi media player ama qofka xukuma.
Waxaad u baahan doontaa in aad ka hor-rakibi Madaxweyne Siilaanyo Oo Video ah ee hoorto video on your Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. App waa bilaash oo lagala soo bixi karaa dukaanka One Madaxweyne Siilaanyo ee. Your Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid noqon doonaa asal ahaan aqbalana iyo app ka soo bixi doonaan shaqada loo kiciyo qaata ee aad u tacsiyeeyaan. On top of in, waxaad u baahan doontaa in aad leedahay aalad DLNA-socon sababtoo ah qalabka shaqeyn doonaa sida dirato.
App DNLA on qalab aad laga yaabo in ay mar horeba la preinstalled ku xiran brand iyo model qalabka. Waxaad u baahan doontaa si aad u bilowdo sidoo kale ku siin doonaa ogolaanshahaaga si ay u wadaagaan waxyaabaha qalab ee dhex server DLNA ee ku Goobta menu 's. Waxyaabaha Stream-awoodaan sidoo kale waxaa lagu xaddidi karaa in files kaliya qalabka. Tan ugu muhiimsan, si loo hubiyo in labada aad Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah iyo qalab DLNA-socon ay ku xidhan yihiin shabakad isku Wi-Fi. Haddii aad jeclaan lahayd inaad sii qulquli waxyaabaha ka kaydinta daruur ku salaysan ama meelo kale oo fog, fiirino galay Skifta.
Tan waxaa loo arkaa in ay hab dheeraad ah si toos ah ama habka loogu daawashada cajaladaha on your Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Halkii ay ka hoorto waxyaabaha ka kaydinta dibadda ama gaari ku adag, waxaad gali kartaa adiga oo videos gal OneDrive ama account SkyDrive ee . Waxaa la mid ah Google ee Cloud ama iCloud, fikradda kaydinta web-ku salaysan Apple ee. Si fudud u saxiixo xisaab ah (haddii aadan haysan mid) ka dibna lagu wareejiyo ama geliyaan aad videos.
Ka dib markii in, ka soo dejisan ee OneDrive ama SkyDrive ee app rogtid oo aad Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Maxaa ku xiga? Just gasho-in aad account ka Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ka dibna dooro waxa video aad jeclaan doonaa si aad u daawato, waayo, maalintii. Waxaad si fudud u keydin karaa waxyaabo kale sida waraaqaha, music, sawirada iyo wax ka badan, ka dibna si toos ah ku helaan iyaga ku Console ah.
Dhisa AllShare waa shaqo ah in yimaado pre-gal lagu rakibay qalabka Android-ku-saleysan. Waxaa laga heli karaa iyo firfircoonaan ee Goobta Menu 's (wax yar oo kala duwan ku xidhan nooca iyo moodelka qalab). Daarida ama jeestay hawsha ku siinayaa isku mid, ama haddii aan dhaw raaxadeeda waxa la mid kale laba hab oo kor ku xusan.
Fadlan hubi in aad Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waxaa ku xidhan shabakad la mid ah sida qalab Android ku salaysan si aad u awood screen mirroring sameeyo. Haddii kale, aad Console lama ogaan karo qalabka. Ka dib markii in, si fudud u daawan ama Radidiyaha file video kasta oo ku saabsan qalab aad iyo aad u yeelan doontaa in ay u arkaan on your Console. Haddii aad u baahan tahay si ay u helaan videos ka kaydinta dibadda ama gaari ku adag, waxaad u leedahay in la sameeyo oo dhan waxaa kaliya wareejiyo qalab aad Android-ku-saleysan.
> Resource > Video > Sidee u daawan karaa Video On Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah?